प’ति बा’हिर भ’एको बे’ला ग’र्भ’व’ती भएकि श्रीमति’ले दिइन् दु’नि’याँ च’कि’त हुने य’स्तो ज’वाफ! – live 60media
प’ति बा’हिर भ’एको बे’ला ग’र्भ’व’ती भएकि श्रीमति’ले दिइन् दु’नि’याँ च’कि’त हुने य’स्तो ज’वाफ!
एजेन्सी । विश्वमा हरेक दिन नयाँ र अ’नौ’ठा घ’ट’नाहरु भइरहेका हुन्छन् । अहिले बाहिर आएको समाचार भारत बिहार राज्यको हो । जगदीशपुर पुलिस क्षेत्र यहाँ छ । यहाँ एक महिला ग,र्भ’व’ती हुने बित्तिकै बबाल भएको छ । महिलाको नन्द यस सम्बन्धमा डीआईजी पुगेकी थिईन् । अब तपाई सोच्दै हुनुहुन्छ, के भयो ?वास्तवमा, ग’र्भ’वती महिलाको पाँच वर्ष पहिले विवाह भएको थियो । ऊसँग डेढ वर्षकी छोरी पनि छ **भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला ****
तबसम्म सबै कुरा ठीक थियो । महिलाको नन्दका अनुसार उनकी भाउजु तीन महिनादेखि ग,र्भ’व’ती भइन् ।जबकि उनको दाई लामो समय देखि सँगै छैन । दाई सात महिना देखि कोलकातामा छन् । सात महिना देखि भेटघाट नभएपछि भाउजुको पे’टमा ब’च्चा कसरी आयो भन्दै प्रहरीमा उनले खबर गरिन् ।
दैनिक भास्करका अनुसार नन्द यस बारे आक्रोशित थिइन् । उनी डिआइजी विकास विभवसम्म पुगिन् । उनले डिएनए परीक्षणको माग गर्न थालिन् । जब डाक्टरहरूले अनुसन्धान गरे, तब यो पत्ता लाग्यो कि बच्चा तीन महिनामा १२ दिनको भएको रहेछ ।नन्द रिसाएको मात्र थिइनन्, महिलाका पतिले पनि यो को हो भनेर प्रश्न गर्न थाले ? अब ती आइमाईले दिएको जवाफ सबैभन्दा रोचक छ । उनले गाउँ पञ्चायत बसेका बेला आफुसँग राती सप’नामा आएर पति’ले यौ’न ‘स’म्ब,न्ध राखेको अनी बच्चा पनि उनैको भएको दावा गरिन् ।
तर, जब सम्पूर्ण परिवारलाई यो थाहा भयो, ती महिलाले भनिन् कि यदि तपाईले मलाई घरमा राख्न चाहानुहुन्छ भने राख्नुहोस्, अन्यथा म तिमीलाई केही झुठो केसमा फसाउनेछु। तर यस धम्कीको कुनै असर भएन र परिवारले त्यसलाई घरमा राख्न मानेन ।कुरा यहीं समाप्त भएन । परिवारका सदस्यले महिलालाई साथमा राख्न अस्वीकार गरेपछि पञ्चा,यत बसे ।
त्यहाँकी महिलाले भनिन् कि बच्चा उसको पतिको हो । उनका पति सपनाहरुमा आउँथे। र यही कारणले गर्दा उनी ग,र्भव’ती भइन् ।पञ्चायतको समयमा महिलाको फोन पनि जाँचिएको थियो । उनको फोनमा केटाको नम्बर फेला पर्यो । त्यसपछि पोल खोलियो कि यो बच्चा त्यो केटोको हो, र यी महिला उसँग स’म्ब,न्ध’मा छन् । सांकेतिक तस्बिर ।
← भाईरल गायिका कल्पना दाहालको आवाजमा रहेको दशैं गीत सार्बजनिक (भिडियो सहित)
सुत्ने बेला मा उडिरहेको नागलाई देखेको5सेकेन्डमा ॐ लेखी सेयर गर्नुहोस्। तपाईंको अधुरो काम बन्नेछ →